သာမန်ရိုးကျလိပ်ခေါင်းခွဲစိတ်ခြင်း - Traditional Hemorrhoidectomy Vs လေဆာဖြင့်လိပ်ခေါင်းကုသခြင်း - Laser Hemorrhoidectomy - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
Health Articleသာမန်ရိုးကျလိပ်ခေါင်းခွဲစိတ်ခြင်း – Traditional Hemorrhoidectomy Vs လေဆာဖြင့်လိပ်ခေါင်းကုသခြင်း – Laser Hemorrhoidectomy
သာမန်ရိုးကျလိပ်ခေါင်းခွဲစိတ်ခြင်း – Traditional Hemorrhoidectomy Vs လေဆာဖြင့်လိပ်ခေါင်းကုသခြင်း – Laser Hemorrhoidectomy
လိပ်ခေါင်းဆိုတာ (Hemorrhoid) တော်တော်လေးအလုပ်ရှုပ်ပြီး ခံရခက်တဲ့ရောဂါပါ။ အထူးသဖြင့် အဆင့် (၃) နဲ့ အဆင့် (၄) လိုမျိုး အပြင်ထွက်လာတဲ့လိပ်ခေါင်းရှိတဲ့သူတွေမှာပေါ့။ အဲဒီအဆင့်တွေမှာဆို ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒါဆို ဘယ်လိုလိပ်ခေါင်းကုသနည်းက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ?
သာမန်ရိုးကျလိပ်ခေါင်းခွဲစိတ်ခြင်း – Traditional Hemorrhoidectomy
ဒါကတော့ ဟိုးအရင်တည်းက သုံးလာကြတဲ့ လိပ်ခေါင်းကိုခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်နည်းပါ။ ဆရာဝန်ကနေ ကျောရိုးမှထုံဆေးထိုးပြီး လိပ်ခေါင်း ကို ဓားနဲ့ဖြတ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုကတော့သိပ်မများပေမယ့် (၅) ရက်ကနေ (၇) ရက်လောက်ဆေးရုံတက်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးရုံတက်ဖို့ အချိန်ပိုပေးရပါမယ်။ ခွဲထားတဲ့နေရာမှာအမာရွတ်လဲကျန်နိုင်ပါတယ်။လေဆာဖြင့်လိပ်ခေါင်းကုသခြင်း – Laser Hemorrhoidectomy
ဒီနည်းလမ်းကတော့ နောက်ဆုံးပေါ်လိပ်ခေါင်းကုသနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မှ ကျောရိုးထုံဆေး အရင်ပေးပါမယ်။ ပြီးနောက် လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုကာ လိပ်ခေါင်းအပါအဝင် စအိုဝမှာရှိတဲ့ သွေးကြောများကို သေးငယ်ကျုံ့ဝင်အောင်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓားမသုံးလို့ သွေးထွက်နဲပြီး အနာကျက်လည်း ပိုမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမာရွတ်လဲကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ (၁) ရက်ကနေ (၂) ရက်အတွင်း ဆေးရုံဆင်းနိုင်လို့ အချိန်ကုန်လဲသက်သာပါတယ်။
☎ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Messenger မှဖြစ်စေ၊ Myanmar Viber Hotline +66 819 845 111 မှဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။